Falanqeynta Kulanka Napoli Vs Juventus Ee Horyaalka Serie A Italy
HomeWararka CiyaarahaFalanqeynta Kulanka Napoli Vs Juventus ee Horyaalka Serie A Italy
February 13, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Italy 0
Napoli ayaa martigalin doonta kooxda Juventus kulan ka tirsan horyaalka Serie A iyada oo cadaadiska uu saaran yahay Gennaro Gattuso kadib guuldaradii ka soo gaadhay Atalanta ee Coppa Italia Halka Juventus ay dib boorka iskaga soo jaftay iyadoo ku jirta booska 3 aad ee horyaalka.
Kulanka Napoli Vs Juventus
Garoonka Diego Armando Maradona
Gattuso ayaa laga yaabaa inuu ka maqnaadaan xidigo badan. Elseid Hysaj iyo Diego Demme ayaa dhaawacmay horaantii todobaadkan waxaana la filayaa in ay seegi doonaan kulanka. Kalidou Koulibaly iyo Faouzi Ghoulam ayaa arimo coronavirus ku maqan mana ka qeyb qaadan doonaan.
Kostas Manolas iyo Dries Mertens ayaa sidoo kale kulankaan ku seegi doona dhaawac canqowga ah, taasoo dhabar jab weyn ku noqon doonta Napoli.
Dhaawac: Dries Mertens, Kostas Manolas, Elseid Hysaj, Diego Demme, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam
Juventus:- Andrea Pirlo ayaa dib u soo dhaweyn kara Paulo Dybala oo dhaawac ah, inkastoo ciyaaryahanka reer Argentina laga yaabo inuusan door weyn ka ciyaarin kulanka Sabtida. Arthur ayaan ka mid noqon doonin kooxda ka dib markii uu seegay kulankii semi-finalka ee Juventus ay la ciyaartay Inter Milan xumad darteed. Xiddiga reer Brazil ayuu dhaawac soo gaaray wuuna ka maqnaan doonaa ciyaarta
Aaron Ramsey shaki ayaa ku jira inuu ciyaari karo madaama aan weli la ogeyn hadii ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Wales uu ka soo kabsaday dhaawac muruqa ah. Ramsey ayaa seegay seddexdii kulan ee ugu dambeysay Juventus. Dhanka kale, Leonardo Bonucci ayaa lagu wadaa in la nasiyo kulanka sababo la xiriira murqaha muruqa.
Dhaawac: Arthur, Leonardo Bonucci
Shaki: Paulo Dybala, Aaron Ramsey
Juventus ayaa kaliya ka sarreysa Napoli dhanka guulaha, iyagoo badiyay seddex ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeysay, iyadoo Napoli ay badisay labada kale.
Kooxda Andrea Pirlo ayaa durbaba diiwaan gelisay inay guul ka gaarto Napoli xilli ciyaareedkan Super Cup-ka Talyaaniga.
Si kastaba ha noqotee, kulankoodii hore ayaa la joojiyay horaantii xilli ciyaareedka ka dib markii Napoli ay ku guuldareysatay inay iska xaadiriso Turin sababo la xiriira kiisaska coronavirus ee lagu arkay kooxda.